लकडाउनमा मनको स्याहारसुसार कसरी गर्ने ? - Khabar Break | Khabar Break
– गोपाल ढकाल,कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस भनेर नेपालमा पनि लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी गरिएकोछ। रोगको महामारी हुँदा शारिरिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने त हुनेनै भयो। साथै मानसिक स्बास्थ्य समस्याको जोखिम पनि बढेर जान्छ। शरीर र मन एक अर्काका परिपुरक हुन । शरिरमा समस्या आउदा मनमा पनि असर पर्छ। साथै मनमा समस्या आउदा शरिरिक लक्षणहरु पनि देखिन सक्छन। लकडाउनको समयमा सेल्फ क्वारेन्टाइन वा सेल्फ आईसोलेसनमा बस्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नो मनको स्याहार सुसारमा ख्याल नपुर्याउदा मनोसामाजिक समस्या वा मनोरोगको जोखिम बढछ । प्राकृतिक बिपत्ति वा प्रकोपहरु पर्दा ,कोरोना भाईरसले रोग ब्याधि फैलिदा वा मानव सूर्जित ठुला ठुला घटनाहरुले स्वभावैले मनोबैज्ञानिक वा मानसिक रोग समेत स्वभाबैले बढेर जान्छ ।
को‍नोनाको प्रकोप जस्ता घटनाहरुले स्वभावैले मानिसको मनमा चोट पुर्‍याउछ। मनमा असरहरु देखिन थाल्छन। यसलाई असहज अबस्थामा देखिने स्बभाबिक प्रतिक्रियाको रुपमा लिईन्छ । धेरैको लागि यस्ता असरहरु अस्थाई हुन्छ । समय बित्दै गएपछि ढिलो चाड‍ो प्राय धेरै जसो मानसिहरु आफै पुर्ब अबस्थामा फर्कन सक्छन् । केहिलाइ भने पुर्ब अबस्थामा फर्कन गार्हो पनि पर्न सक्छ । बिज्ञको सहयोग पनि चाहिन सक्छ ।
९. एक्युट स्टेस डिसअडर्स – तत्कालै देखा पर्ने अन्य तनाबजन्य समस्या ।
संकटको बेला मनमा पर्ने असर भने ब्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुनसक्छ। कसलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा ब्यक्तिको उमेर, लिङ, स्वंय ब्यक्तिको शारीरिक, मानसिक अबस्था, ब्यक्तित्व, परिस्थितिसँग जुझ्ने ज्ञान , सीप, मानसिक क्षमता, अनुभव, तनाब ब्यबस्थापनको तौरतरिका, दैनिक जीवन शैली, ब्यक्तिले प्राप्त गरेको सहयोग जस्ता कुरामा भरपर्छ । बिपतिको बेला कतिपय मानिसले संयमिता गुमाउन पनि सक्छन। उनिहरुले समस्यासँग जुझ्न गलत उपाय वा तरिका अपनाइ रहेका हुन पनि सक्छन् । नचाहदा नचाहदै नकारात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका हुनसक्छन् । बिपतिमा सबैले आफुलाई समाल्न सक्छन् भन्ने पनि हुदैन। उनिहरुलाई सहयोगको जरुरत पर्दछ ।
( लेखक मनोविद् हुन् । मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा कार्यरत छन् । )